Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Machad cusub oo laga furey Jijiga: Al-Nebras Academy(SAWIRO)
Machad cusub oo laga furey Jijiga: Al-Nebras Academy(SAWIRO)
October 8, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
Magaalada Jigjiga ee Caasimada Deegaanka soomaalida ayaa lagafuray Mac’had cusub oo lagumagacaabo Al-Nebras academic
Waxaa kadhacay magaalada jigjiga ee caasimada Deegaanka soomaalida xaflad lagufuray Mac’had Cusub oo lagumagacaabo Al-Nibraas(Iftiin)
Mac’hadkan ayaa waxaa furay Hay’adda Al-Suna oo utaagan arimaha Dacwada iyo waxbarashada Deegaanka soomaalida Itoobiya.
Al-Nibraas waxaa uu qayb kaqaadan doonaa kor’uqaadida waxbarashada Deegaanka soomaalida gaar ahaan Caasimada Jigjiga.
Xafladan oo si heersara ah loosoo abaabulay ayaa waxaa kasooqaybgalay dhamaan qaybahakaladuwan ee bulshada. xafladan oo si aad uheersaraysa loosoo agaasimay ayaa waxaa furfuray Maamulaha Mac’hadkan cusub Sh\_C\_nuur Xasan Rashiid(Bashaash) oo aad ufaahfaahiyay machadkan iyo muhiimada uu uleeyahay bulshada kudhaqan Deegaanka soomaalida Itoobiya .
Kadib waxaa kuxigay oo si aad farxadi ugudheehantahay usoodhoweeyay Furida Machadka C\_waasac Maxamad Asnaaje kusimaha Xafiiska waxbarashada magaalada Jigjiga. Sidookale waxaa kamid ahaa dadkii meesha’kahadlay Sh\_C\_raxmaan Maxamad Xuseen( Nadaara) oo ah madaxa waxbarashada Hay’adda Al-Suna.
Machadka Alnibraas ayay waxaa uu xoogasaarayaa barashada luuqada carabiga iyo culuumteeda waxaa kaloo lagubaranayaa luuqada Englishka Axmaariga iyo xisaabta Al-Nibraas ayaa loogutalagalay in uusoosaaro Arday taya’leh oo dhanwalba kadhisan.
Machadka Al-Nibraas ayaa noqonya machadkii uhoreeyay ee noociisa ookala ah ee lagafuray Deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana kafaa iidi doona dhalinyarada deegaanka ee baahida uqaba waxbarashada.